पुस्तक चर्चा : दरबार हत्याकाण्डबारे (अ) प्रत्यक्षदर्शीको वर्णन कति पत्यारिलो ? - Sidha News
पुस्तक चर्चा : दरबार हत्याकाण्डबारे (अ) प्रत्यक्षदर्शीको वर्णन कति पत्यारिलो ?
१८ वर्षअगाडि भएको दरबार हत्याकाण्ड अझैसम्म धेरै नेपालीहरुको मानसपटलमा ताजै छ । तत्कालीन राजपरिवार नै नामेट पारेको नरसंहार कोबाट भएको थियो भन्ने चित्तबुझ्दो निक्र्यौल अझै हुन सकेको छैन ।
सरकारद्वारा गठित छानविन समिति, दरवार निकटस्थ तथा प्रत्यक्षदर्शीले तत्कालिन युवराज दिपेन्द्रले गोली चलाएको दावी गर्दै आए पनि जनता पत्याउनेवाला छैनन् । कुनै न कुनै दिन ‘वास्तविक हत्यारा’को पर्दाफास हुने पर्खाई छ धेरैलाई । त्यसैले पनि दरबार सम्वन्धी कुनै पुस्तक प्रकाशित हुँदा त्यसले एकखालको कौतुहल ल्याइदिन्छ ।
जनताको यही मनोभावनाको फाइदा उठाएर विगतमा ‘रक्तकुण्ड’ जस्तो अप्रमाणिक किताब लेखियो, जुन लाखौं प्रति बिक्री भयो । तत्कालीन सैनिक सचिव विवेककुमार शाहले ‘मैले देखेको दरबार’ ल्याए । दरबारमै लामो समय काम गरेका व्यक्तिले लेखेको हुनाले त्यसलाई बढी विश्वसनीय ठानियो । उक्त पुस्तकमा दरबार हत्याकाण्ड युवराज दिपेन्द्रले गराएको उल्लेख थियो । यद्यपि, लेखकले राजतन्त्र मास्न चाहने देशी–विदेशी शक्तिले दिपेन्द्रलाई उपयोग गरेको हुन सक्ने काँचो आशंका व्यक्त गरेका छन् पुस्तकमा ।
यही सिलसिलामा अर्को एउटा नयाँ पुस्तक बजारमा आएको छ । ‘दरबारको दुःखान्त ।’
यो पुस्तक राजा वीरेन्द्रका तत्कालीन एडीसी सुन्दरप्रताप रानाले लेखेका हुन् । तर, यस पुस्तकबाट पनि कुनै सनसनीखेज खुलासाको अपेक्षा नगर्नुस् । यसलाई विवेककुुमारकै पुस्तकको अर्को संस्करणका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
जनतालाई सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड र दिपेन्द्र–देवयानी प्रेमका विषयमा पुस्तकमा नयाँ कुरा केही पनि छैन । किताबको आवरणमा भने ‘राजपरिवार र संहारः मैले जसरी देखेँ’ लेखिएको छ ।
रानाको परिचयमा ‘दरबार हत्याकाण्डको साक्षी’ भनिएको छ । तर, पुस्तकभित्र लेखकले ‘गोली कसले चलायो भन्ने आफूले नदेखेको’ भनेर इमान्दारिता साथ स्वीकारेका छन् ।
पुस्तकको २६८ पेजमा उनले लेखेका छन्, ‘हत्याकाण्ड हुँदा म त्रिभुवन सदनको अर्को कुनामा थिएँ । गोली चलिरहेको आवाज सुनेको थिएँ । तर, युवराजधिराजले गोली हानेको मैले देखेको होइन । मलाई युवराजले गोली चलाएको पहिलो खबर मौसुफकै एडीसी गजेन्द्र बोहराले
युवराज दीपेन्द्र बाहिर सर्दै जाँदा उनले एक झलक्क देखेका रहेछन् । त्यसैले त्यस रात बिलियार्ड हलभित्र गोली कसरी चल्यो, त्यसबारे बोहरा र प्रत्यक्षदर्शी शाही नातेदारले भनेका कुरालाई नै मान्नुपर्ने अवस्थामा छु ।’
पुस्तकमा हत्याकाण्डको वयान गर्ने क्रममा रानाले ‘बताइन्छ’, ‘सुनिएअनुसार’, ‘फलानोले मलाई बताए’, ‘फलानोले छानविन समितिलाई बयान दिएअनुसार’ जस्ता भाष्य प्रयोग गरेका छन् । अरु प्रत्यक्षदर्शीको हवाला दिएर उनले दिपेन्द्रले नै गोली चलाएको निस्कर्ष निकालेका छन् ।
‘सबै घटनाक्रम र पृष्ठभूमि बुझेको हुँदा बिलियार्ड हलमा सुरुमा गोली चलाउने व्यक्ति युवराज नै हो भन्ने म ठान्छु,’ पुस्तकमा रानाले लेखेका छन्, ‘तर आम मानिसहरु त्यसलाई पत्याउँदै पत्याउँदैनन् । कतिसम्म भने मेरी आफ्नै दिदीसमेत दीपेन्द्र सरकारबाट त्यो हत्याकाण्ड भयो भन्ने कुरा मान्न अझैसम्म तयार हुनुहुन्न ।’
दिपेन्द्र–देवयानी प्रेमका विषयमा पुस्तकले पहिलेदेखि आइरहेका कुराहरुलाई नै समेटेको छ । लेखकले धेरै कुराहरु अनुमानका आधारमा पनि ठोकेका छन् । दिपेन्द्रको विवाहलाई लिएर राजपरिवारभित्र अन्तरकलह रहेको भनेर उनले पुस्तकमा केही प्रसंगहरु दिएका छन्, तर सबैजसो सुनेको भरमा ।
पहिलेदेखि नै आएकै कुरा हो, दिपेन्द्रसँग दुई सुन्दरी जोडिएका थिए । पहिले सुप्रिया शाहसँग उनी प्रेममा थिए भने पछि देवयानी राणासँग । देवयानीसँग बिहे गर्ने तयारी गर्दा रानी ऐश्वर्याले कडा अवरोध गरेपछि दरवारमा अन्तरकलह बढेको थियो । यसमा राजा वीरेन्द्र निरपेक्ष बसेका थिए ।
दिपेन्द्र र सुप्रियालाई नजिक ल्याउने काम अधिराजकुमारी श्रुतीले गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
‘थाहा पाएअनुसार सुप्रिया र दीपेन्द्र सरकारलाई नजिक ल्याउने काम श्रूती सरकारले नै गरिबक्सेको हो ।’ पुस्तकमा भनिएको छ । दीपेन्द्र १४ वर्ष र सुप्रिया १२ वर्षको हुँदा नै उनीहरुबीच प्रेम सुरु भएको दावी गरिएको छ ।
‘युवराजले ०४४ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि सुप्रियासँग बिहे गर्ने चाहना प्रकट गरिबक्स्यो । त्यसबेला सरकारको उमेर १६ वर्ष मात्र पुगेको थियो । त्यति सानो उमेरमा बिहे गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले बडामहारानीले सुन्नासाथ अस्वीकृत गरिबक्स्यो,’ रानाले लेखेका छन् ।
एसएलसीपछि उच्च अध्ययनका लागि बेलायतको इटन कलेजमा जाँदा दीपेन्द्र देवयानीसँग नजिक भएका थिए । नेपाल फर्किएपछि उनीहरुको सम्वन्ध थप गहिरियो ।
देवयानीको विषयमा दीपेन्द्रले आफूलाई मदिरा पिलाउँदै भनेको भन्दै रानाले लखेका छन्, ‘बुझ्यौ सुन्दर, देवयानीसँग मेरो हेड मिल्छ । मैले सेक्सपियरको कुनै भर्स आधा भनेपछि आधा उसैले भन्न सक्छे । हाम्रा रुची पनि मिल्छन् । ब्युटीफुल र कल्चर्ड पनि छे । सुप्रियासँग भन्दा देवयानीसँग मेरो जोडी जम्छ ।’
तर, देवयानीलाई बुहारी स्वीकार्न रानी ऐश्वर्या तयार भइनन् । दरबारभित्र चन्द्र शम्शेर र जुद्ध शमशेरका खलकबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो । रानी छोराको बिहे जुद्धशम्शेर वंशसँग गराउन चाहन्थिन्, जुन उनको माइती खलक थियो ।
‘आफ्ना छोराको बिहे पनि जुद्धसमशेर खलकमै गर्नुपर्छ भनेर खासगरी बडामहारानी सरकारले अडान नै राखिबक्सेको दरबारमा सुन्ने गरिएको थियो,’ पुस्तकमा लेखिएको छ ।
लेखकले ‘अर्को भनाइ’ भन्दै देवयानीसित बिहे गराउँदा दरबारमा भारतीय प्रभाव बढ्ने चिन्ता रानीलाई रहेको उल्लेख गरेका छन् । देवयानीकी आमा भारतको ग्वालियरको राजघरानाकी हुन् । हजुरआमा ग्वालियरकी राजमाता विजयाराजे सिन्धिया भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कि उपाध्यक्ष थिइन् भने सानीमा बसुन्धराराजे सिन्धिया राजस्थाको मुख्यमन्त्री थिए । भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशीले समेत काठमाडौं आएर देवयानीका पक्षमा दरबारलाई मनाउन खोजेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
पुस्तकका अनुसार पछिल्लो समय दीपेन्द्र देवयानीलाई भगाएर बिहे गर्न चाहन्थे । तर, रानी ऐश्वर्याले यदि देवयानीसँग बिहे गरेमा कान्छा छोरा निराजनलाई गद्दीको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
देवयानीसँगको प्रेम सफल पार्न नसकेकै कारण दिपेन्द्रले नरसंहार मच्चाएको पुस्तकको निस्कर्ष छ । दरबारभित्र भएको शुक्रबारे पार्टीमा २१ जना राजपरिवारका सदस्य थिए । नरसंहारमा १० जनाको निधन भयो भने ४ जना घाइते भए । अन्य सकुशल रहे । जिवित रहेकाहरु सबैले दिपेन्द्रले गोली चलाएको बयान छानविन समितिलाई दिएका छन् ।